Ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa AMISOM oo la wareegay Degmada Aadan Yabaal – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa AMISOM oo la wareegay Degmada Aadan Yabaal
7th April 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa si wada jir ah gacanta ugu dhigay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe, kuwaasi oo iminka ku guda jira howlo baaritaanno ah.
Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa AMISOM ayaa si Nabadgelyo ah ku galay degmada, kuwaasi oo iminka bilaabay howlo amni xaqiijin ah, si looga hortago in haraadiga qaraxyada ay aaseen Shabaab aysan waxyeelo uga soo gaarin ciidanka iyo shacabka halkasi ku nool.
Degmada Aadan Yabaal ayaa ka mid ah goobaha ay haraadiga Al-Shabaab dadka ku dhibaateyn jireen, waxaana iminka maamulka halkaasi ka jira ay dadaal u galaayan sidii dib loo soo celin lahaa adeegyadii bulshada ee halkaasi ka jirtay.
Saraakiisha ciidamada hogaamineysa ayaa tilmaamay inay kulamo la qaadanayaan odoyaasha dhaqanka, si ciidamada gacan loogu siiyo sugidda amniga oo ay la shaqeeyaan.
Siilaanyo oo casho sharaf xalay Hargeyso ugu sameeyay wefdigii dhowaan halkaa gaaray- Sawirro
Middle East Film & Comic Con in Dubai to Host Comics Expert Vincent Zurzolo With Over $1 Million in Rare Comics